कोरियाले जे सिकायो… – Kantipur Press
भाषा पास भइसकेपछि प्रकियाको लागि जाने क्रममा धेरै जना साथीहरुसग भेट हुन्थ्यौ ! भेटको समय क्षणिक हुन्थ्यौ तर कुरा भने निकै गम्भिर हुने गर्थ्यौ !
इस्सु भएपछि पुलिस रिपोर्ट बनाउने सिलसिलामा एक जना साथिसग सानो परिचय पश्चात उसले बिगतको कुरालाइ सम्झदै भन्यौ ! ” यार ब्रो एकदमै मिल्ने साथी कोरिया गएपछि सुरु सुरुमा त बोल्थ्यौ पछि त बोल्नै छाड्यौ! क्या भाउ बड्नि रहेछ यार!
त्यसैगरि मेडिकल गर्नेबेलामा मेडिकल सगै गरेपछि अर्को एक जना साथि सग राम्रै साथित्व केहि क्षणमै बसिसकेको थियो! उसले चियाको प्रस्ताब राख्दै एकछिन बसौँ न भनेपछि चिया गफ सुरु भयो!
” यार ब्रो ! नेपाल हुदा त्यो गाउको दाइ एकदम जिग्रि थियो! गएको एक बर्ष पछि मैले २० हजार मागेको छैन भन्दिरा यार!!! क्या ठुलो पल्टियो यार ब्रो!
सिसिभिआइ फाराम भर्ने बेलामा लास्टमा लाइन मा वसेको साथी सग केहि बेरको मौन धारण पछि हल्का गफ सुरु भयो!गफ सुरु गर्न गार्हो हो!गफ सुरु भएपछि कोरियाको प्रकियामा बसेको साथीहरु भेट्दा क्षणिक समयमै निकै नै जिग्रि जस्तै हुन्थे!
उसले पनि धेरै दुख पछि बल्ल कोरिया जान पाइने भयो यार ब्रो!बिगतका कुरा निकाल्दै उसले पनि गुनासो पोख्यौ ३ बर्ष कोरिया बसेको एक जना यार तेत्रो कोरिया बस्दा पनि पैसा छैन भन्छ यार! हामिले माग्छ भनेर हो कि कमाको डाड गर्छ भनेर तेसो भनेको हो ! भन्दै लास्टमा आफ्नो गफ केहि अपशब्दले टुङ्ग्यायौ!
यो सिलसिला टिकट काट्ने जाने ठाउ सम्म पनि जारि नै थियो! जो जो भेटिन्थे एक छिन गफ हुदा बिगतमा कोहि न कोहि लाइ सम्झेर फुर्ति देखायो भन्ने कुरा गरिहाल्थे!
टिकट काट्ने लाइनमा सबै जना खैला बैला गर्दै थिए! यस्तै कुरा हुदै थियो! एकजना साथीले बोलि हालो”””” अ! यार ब्रो५ बर्ष कोरिया बसेको एउटा यार रिण छ भन्दै थियो!कति सम्मको ढटुवा हुनि यार ब्रो कोरिया गएपछि मान्छेहरु!रिण छ रे ( अपशब्द बोलि हालो!
अर्को एकजनाले अर्को कुरा थप्यो, तेहि त यार! झन हाम्रो गाउको एकजना त नेपालमै कोरियाको प्रकिया नहुन्जेल १० हजारको भए पनि काम गर! पैसा सानो हुदैन ! भनेर सम्झाउदै थियो!
हेर न यार् ब्रो! उ कोरियामा लाख कमाउनि मलाइ १० हजारको भए पनि काम गर भनेर दि राको!दुख गरेपछि कोरियामा नै गएर गर्नि नि! जाबो १० हजारको लागि किन दुख गर्नि होर!
यि त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन यस्ता धेरै छन!अनि समय सगै बुझिदै छ!१० हजार माग्दा किन छैन भनेछ भन्नि कुरा बुझिदै छ!५ बर्ष बस्ता पनि घरको रिण किन सकिएन भन्ने कुरा बिस्तारै बुझिदै छ!एकदमै मिल्ने साथी किन बोल्न छोड्यौ त्यो पनि बुझिदै छ! पैसा माग्दा कहिले काहि छैन उत्तर किन आउने रहेछ बल्ल थाहा हुदै छ!
१० हजारको काम भए पनि गर भनेर दिएको अर्ति कति राम्रो रहेछ बल्ल थाहा हुदैछ!अनेक कुरा हरु बल्ल थाहा हुदैछ !अझै थाहा हुन बाकि धैरै छन!